के हो ‘एमाले महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा’ लेखिएको भाइरल पोस्टको तथ्य ? मंगलबार, मंसिर १४, २०७८
म्यासेन्जरमा होन्डाको नाममा ‘स्पाम’ आतंक, नखोल्नुहोला यस्तो लिङ्क बिहीबार, साउन ७, २०७८
तथ्य जाँच: कोभिड-१९ का खोपले मानिसलाई चुम्बक बनाउँदैनन् सोमबार, जेठ ३१, २०७८
फ्याक्ट चेकः के ओलीले भनेजस्तै गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त भास्कराचार्यले नै पत्ता लगाएका हुन् ? केपी ओलीले भनेजस्तो ‘गुरुत्वाकर्षण पत्ता लगाउने व्यक्ति’को तक्मा कुनै एक व्यक्तिलाई जाँदैंन । गएपनि त्यो उनले भनेजस्तो भारतीय भास्काराचार्यलाई त झन् जाँदै–जाँदैन । किनभने सोह्रौं शताब्दीका युरोपका गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्रीहरुको सामूहिक बैज्ञानिक चेतनाले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त जन्मिएको हो । बरु न्युटनले ‘टेकेका दिग्गजको कुमहरु’मध्येको एक भास्काराचार्यको पनि हुन सक्ला ! बुधबार, पुस २९, २०७७
तस्बिरमा जो बाइडेनले जर्ज फ्लोयडकी छोरीसँग माफी मागेका हुन् ? नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बच्चाको अगाडि घुँडा टेकिरहेको तस्बिर नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ केही दिनयता व्यापक रुपमा शेयर भएको छ । सोमबार, पुस २०, २०७७
कोरोना भाइरस परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ र नेगेटिभ कसरी आउँछ ? के हो सिटी काउन्ट ? पीसीआर परीक्षण गर्दा सिटी काउन्ट १० देखि ३५ सम्मकोलाई पोजेटिभ मानिन्छ । १० भन्दामुनि न्यून मात्रामा देखिन्छ। पछिल्लो समय २४ सिटीभन्दा तल हुँदा भाइरस सक्रिय हुन्छ। त्यसरी संक्रमित भएको व्यक्तिले सजिलै अरुलाई सार्न सक्छ। मंगलबार, भदौ ३०, २०७७